Indlela yokwenza enye iAkhawunti ye-Instagram kumanyathelo ambalwa? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani enye iakhawunti ye-Instagram kumanyathelo ambalwa?
Oktobha 25, 2020 0 IiCententarios 448
Ukuba sele unayo iakhawunti ye-Instagram kwaye ufuna ukwenza enye, inyani yile Uyenza njani enye i-akhawunti ye-Instagram Ayisiyondlela inzima okanye inzima ukuyenza, kodwa ukuba awuyikholelwa, uya kuba nakho ukufumana eli nqaku.
Uyenza njani enye iakhawunti ye-Instagram: Inyathelo ngenyathelo
Kungenxa yokuba usebenzisa iinkonzo ze-Instagram ngeenjongo zobuqu kwaye ufuna ukuba neakhawunti engaphezulu kwesinye esebenzayo okanye ngenxa yokuba ufuna ukwahlula iakhawunti yakho yobuqu kule intsha ithengiswayo, i-Instagram yenye yeqonga leendaba ezikuvumela ukuba ube nokuninzi yeakhawunti yeprofayile.
Mhlawumbi ukhe wazibuza ngaxa lithile Uyenza njani enye iakhawunti ye-Instagram ukuba sele ndinayo? o Uyenza njani enye iakhawunti ye-Instagram kwiselfowuni yam?Ewe, into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba ngumsebenzi olula kakhulu kunokuba ucinga.
I-Instagram ivumela ulawulo lweeakhawunti ezintlanu ngaxeshanye, ngento enye ngokuchasene nayo, nganye nganye kufuneka idityaniswe kwi-imeyile eyahlukileyo.
Ke ukuba uyazibuza Uyenza njani enye iakhawunti ye-Instagram nge-imeyile efanayo, Siyaxolisa ukukwazisa ukuba impendulo ayikhanyisi.
Ekuphela kwendlela yokusebenzisa i-imeyile enye kwiiakhawunti ezahlukeneyo ayikuko ukucima enye kwaye emva koko wenze enye Nangona kunjalo, ngekhe ube nakho ukusebenza ngaxeshanye, njengoko iqonga lingakuvumeli okwangoku.
Into esiza kuyichaza apha ngezantsi ngamanyathelo ekufuneka uwalandele ukwenza iakhawunti yesibini ye-Instagram eya kuthi ngokuzenzekelayo idityaniswe kwiakhawunti yakho ephambili, umsebenzi ongazukuthatha ngaphezulu kwemizuzu embalwa yexesha lakho kwaye onokuwenza ngaphandle kokuthuthuzela ikunika iselfowuni okanye ikhompyuter yakho:
Ngena kwiselfowuni yakho kwisicelo se-Instagram osenokuba usifakile ngaphambili. Ngena kwaye ufikelele kwiprofayili yakho ngokucinezela i icon ebekwe kwikona esezantsi ekunene.
Ungayifumana ngohlobo lwe-Instagram.
Kwikona ephezulu ngasekunene ungabona uphawu oluchongwe yimigca emithathu ecwangciswe ngokuthe tye, cofa.
Khetha ukhetho "Useto", oya kuthi uluqonde ngenkcazo yalo yohlobo lwevili elinegiya.
Ezantsi, ngentla nje kukhetho olukuvumela ukuba uphume, uya kubona icandelo lokongeza okanye ukongeza iakhawunti.
Nje ukuba ukhetho lwangaphambili lukhethwe, kuya kuvela ifomathi yakudala yokufikelela kwiqonga, kodwa kule meko ufuna ukwenza iakhawunti entsha, kuya kufuneka ucofe ku "Bhalisa".
Enye into yokuqala eya kuvela kwiscreen sakho iyahambelana nokungena kwiakhawunti yakho ye-Facebook. Nangona kunjalo, ukuba sele uyisebenzisa kunye neakhawunti yakho ephambili, ngekhe ukwazi ukwenza njalo ngeakhawunti entsha.
Ngokuhambelana Uyenza njani enye iakhawunti ye-Instagram ene-Facebook efanayo, ayinakwenzeka. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba kukudibanisa iiakhawunti zakho ze-Instagram kunye noFacebook.
Ukuqhubeka noku kungasentla, ukuba sele usebenzisa i-Facebook ukungena kwiakhawunti yakho ephambili, khetha ukusebenzisa i-imeyile okanye inombolo yefowuni ukubhalisa.
Ungalibali ukuba i-imeyile ayinakuphindwa kwiakhawunti engaphezulu kwesinye, ke ukuba ufuna enye indlela kwaye awunayo enye i-imeyile, kuya kufuneka wenze entsha.
Kwimeko yokusebenzisa i-imeyile, iqonga liya kuthumela umyalezo kwibhokisi yakho engenayo yokuqinisekisa idilesi esele ichaziwe.
Ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa inombolo yakho yefowuni, uya kufumana kuyo ikhowudi yokuqinisekisa ekufuneka uyingenisile kwi-Instagram ukuze uqhubeke nokubhalisa.
Emva kokuqinisekisa i-imeyile okanye ifowuni, faka igama ofuna iprofayile yakho ukuba libe nalo, igama lakho kunye nokwenza igama lokugqitha lokhuseleko. Emva kwexesha, yiza negama leprofayile ofuna ukuba uchongwe ngalo kwinethiwekhi yoluntu.
Kubalulekile ukuba igama lakho lomsebenzisi alifani nabanye abasebenzisi, ke ukunqanda le meko, i-Instagram iyakubonisa ngwevu "X" okanye itsheki eluhlaza, kuxhomekeke ekubeni ungeno lwamkelekile na okanye hayi.
Isicelo esifanayo siya kuncomela igama elinye okanye nangaphezulu, ngokuhambelana negama lakho lokuqala (ebelikhe lanikwa ngaphambili)
Into elandelayo eza kwenzeka, iya kuba kukuba i-Instagram iya kuqhubeka ikubuza ukuba uyafuna ukudibanisa iakhawunti yakho ye-Facebook kule akhawunti intsha, kodwa njengoko besesitshilo ngaphambili, oku kunokwenzeka kuphela ukuba iakhawunti yakho ephambili ayixhumekanga kwesi sixhobo.
Ungatsiba inyathelo elidlulileyo kunye nokukhetha okubonelelwa yi-Instagram, ukukhangela phakathi kwabafowunelwa bakho kwabo bantu baneakhawunti eqongeni kwaye unokulandela kwiakhawunti yakho.
Okokugqibela, unokujonga icandelo elikuvumela ukuba ufumane abantu abatsha, oko kukuthi, indawo apho ungafumana khona izindululo okanye iingcebiso zomsebenzisi ezenziwa ngokuzenzekelayo lusetyenziso. Unokukhetha ukulandela nayiphi na kuzo okanye ugqibezele ubhaliso ngaphandle kokwenza oku.
Ulungile! Uya kuba sele uyenzile iakhawunti yakho yesibini kwi-Instagram ngokulula nangokulula. Kufuneka kuqatshelwe ukuba zombini iiakhawunti ziya kudityaniswa ngokuzenzekelayo kwaye zikhethe ngoku nqakraza kwigama lomsebenzisi elibekwe ngasekunene.
Siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda inqaku lethu ku Ungabhalisi njani kwi-Instagram ngaphandle kokuphulukana neefayile zakho, iifoto okanye ividiyo.
1 Uyenza njani enye iakhawunti ye-Instagram: Inyathelo ngenyathelo
1.1 Inyathelo ngesinyathelo
1.2 Inyathelo lesithandathu
1.3 Iinkcukacha zokugqibela
Ungabhalisi njani kwi-Instagram ngaphandle kokuphulukana neefayile zakho
Indlela yokumakisha umntu kwibali le-Instagram?